लक्ष्मी भण्डारी - साप्ताहिक
लक्ष्मी भण्डारी, आश्विन ७, २०७६
समाजमा खुलापनको विस्तार र शिक्षामा सहज पहुँचले सिर्जना गरेको अवसरहरू यतिबेला नेपालमा पनि सहज छ । त्यसैले पनि नेपालीहरू अहिले घुम्ने कुरामा अघि देखिएका छन् । खासगरी नेपाली महिलाहरू घुम्ने मामिलामा अहिले बढी उदार र खर्चालु देखिएका छन् । नेपालमा पछिल्लो केही दशकयता छुट्टी मनाउन तथा रिफ्रेसमेन्टका लागि परिवारसहित घुमघाममा निस्कने ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ ।
लक्ष्मी भण्डारी, श्रावण ९, २०७६
नेपाल ई–स्पोर्टस एसोसिएसन (नेसा)का अध्यक्ष सुरज डंगोलका अनुसार नेसाले गत वर्षदेखि कसप्लेयरहरूबीच प्रतिस्पर्धा समेत गराउँदै आएको छ । त्यसमा उनीहरूको कलात्मक सिर्जनालाई मुख्य स्थान दिइन्छ । गत वर्षको कसप्लेयर प्रतिस्पर्धामा २० जना भन्दा बढी प्रतिस्पर्धी थिए । यो वर्षको सेप्टेम्बर ६ र ७ मा भृकुटीमण्डपको हलमा ई–स्पोर्टसअन्तर्गत डोटा टु, फिफा–१९ गेम हुँदैछ भने यो वर्ष पनि कसप्ले प्रतिस्पर्धा समेत हुनेछ ।
विद्यार्थीको भविष्यमा अभिभावकको भूमिका
लक्ष्मी भण्डारी, असार २५, २०७६
हरेक आमाबाबुका लागि सन्तानको शिक्षादीक्षा सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हुन्छ । कहाँ पढाउने ? कस्ता शैक्षिक संस्था राम्रा हुन्छन् ? कस्तो वातावरणमा सन्तानले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सक्छन् ? यी र यस्ता विविध प्रश्न आमाबाबुमा उब्जिइरहेको हुन्छ ।
लक्ष्मी भण्डारी, असार २४, २०७६
पहिलो कुरा आफू कुन विषयमा अब्बल छ सोही अनुसारको कलेज हेर्नुपर्छ । विभिन्न टेक्निकल कलेजहरू छन्, आफू जेमा सक्षम हो सोही विषयमा दक्षता हासिल गर्न सकिने शैक्षिक संस्था छान्नुपर्छ । ठूला र आकर्षक सुविधाले मात्र कलेज राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्दैन । मुख्यत व्यवहारिक ज्ञान, सीप र संस्कार सिकाउन सक्ने शैक्षिक संस्था नै राम्रा हुन ।
आईइसी कलेज अफ आर्ट एण्ड फेशनको आयोजनामा नेपालका टप मोडलले सोही कलेजका फेशन डिजाइनिङ विधाका विद्यार्थीका क्रियटिभ पहिरनमा र्याम्प वाक गरेका थिए ।
प्लस टु शिक्षामा अब नयाँ मोड
लक्ष्मी भण्डारी, जनक तिमिल्सिना, नरेन्द्र रौलेअसार ५, २०७४
शिक्षा नीति एवं नियमावली हाम्रा परिवेश तथा परिस्थितिअनुकूल हुनुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा र नतिजाको मापनअनुसार कलेजको ग्रेड निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने शिक्षा व्यवसायीहरूको माग रहँदै आएको छ । यता विद्यार्थीहरू भने व्यवसायिक हितका लागि पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने हैसियत भएकाहरूले प्राज्ञिक पृष्ठभूमि र आवश्यक योग्यता नभए पनि नाफामुखी कलेज खोल्न पाउने भएका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।